Ny Endrika 12 Ny Vehivavy Ogandey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2017 6:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, বাংলা, Ελληνικά, မြန်မာ, Français, Aymara, नेपाली, Nederlands, Türkçe, Swahili, čeština , Esperanto , عربي, English
Tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy, 8 Martsa 2017, nitantana fanentanana mampiseho ny endrika isan-karazan'ny vehivavy Ongadey ny This is Uganda (Ongada ity). Mampiasa ny tenirohy #SheRunsUg, nampiseho sary miisa 87 ahitana topi-maso ny fomba fiainan'ny vehivavy Ongandey andavanandro.
Araka ny fanisam-bahoaka taona 2014 avy amin'ny Biraon'ny Antontanisa Oganda, ny vehivavy no mandrafitra ny 51% n'ny mponina ao amin'ny firenena manontolo raha latsaky ny atsasaky ny fitambaran'ny mponina mpiasa kosa ny lehilahy.
Ity ny vehivavy Ogandey. 18 (Sary avy amin'i @phionap)
Phionah Mutesi, izay teraka tao amin'ny faribohitry ny mahantra lehibe indrindra ao Oganda no lasa tompon-dakan'ny lalao “echec” voalohany tao Oganda. Lohahevitry ny sarimihetsika Hollywood, “The Queen of Katwe” ny tantarany,